Ogaden News Agency (ONA) – Afgambi Dhicisoobay oo Ka Dhacay Dalka Gabon.
Afgambi Dhicisoobay oo Ka Dhacay Dalka Gabon.
Posted by ONA Admin	/ January 8, 2019
Militariga dalka Gabon ayaa shalay oo Isniin ahayd la wareegay qeybo kamid ah xarumaha dowlada iyo Telefshinkada & Raadiyaha Qaranka iyagoo ku dhawaaqay in Madaxweyne Cali Bongo oo arrimo caafimaad dalka uga maqan uusan xilka sii heyn karin.
Kooxdan militariga oo la baxay Dhaq-dhaqaaqa Wadaniyihiinta Difaaca iyo Amniga Gabon ayaa sheegay in Madaxweynaha dalkaasi Cali Bongo uusan xiligan tabar u lahayn in uu xilkaasi siihayo. Cali Bongo ayaa bishii Oktoober arrimo caafimaad loogu qaaday dalka Sacuudiga ayaa hada ku sugan magaalada Rabat ee caasimada Marooko halkaasi oo la sheegay inuu ku nasanayo.
Afahayeen u hadlay dowladda Gabon ayaa saxaafada u sheegay in xaaladda dalka Gabon hadda ay degan tahay kaddib markii ciidamo ay la wareegeen Raadiyaha dowladda halkaas oo ay kaga dhawaaqeen isku day afgembi.
Guy-Bertrand Mapangou ayaa sheegay in ciidamada sida militariga u tababaran la geeyay agagaarka dhismaha warbaahinta dowladda si ay ammaanka u sugaan.